ILondon ukuya e-Amsterdam Nge-Eurostar Sitimela Kusuka ku- € 40 | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Holland > ILondon ukuya e-Amsterdam Nge-Eurostar Sitimela Kusuka ku- € 40
Omunye wemizila ebekwe ethandwa kakhulu travel eYurophu esuka eLondon Amsterdam, uhambo ezisheshayo phezu 4 abagibeli kwezigidi ezingu okwenza uhambo unyaka ngamunye. Inketho ephezulu yezokuhamba ngesitimela nge-Eurostar, wesitimela high-speed yokuxhuma izihloko ezimbili European. Lo mzila, labavulekela e 2018, uhlala ukukhetha okuhle kulabo ngifuna imali futhi ujabulele lula ukuthi wesitimela travel inikeza.
ngezansi, ungathola yonke imininingwane oyodinga ukukusiza ukuphatha iLondon yakho ukuya e-Amsterdam Eurostar.
Lesi sihloko sabhalwa ukufundisa amakhasimende mayelana travel isitimela sidalwe Gcina Isitimela, Iwebhusayithi Amathikithi Eshibhe kakhulu Emhlabeni.
Eurostar zemininingwane Times Kusukela London Ukuze Amsterdam
I Eurostar siphela ngokuvamile, nabantu abafika ku 16 Ukusuka ngelanga kuye namaholide ngezimpelasonto. Isitimela sokuqala esivela eLondon siya e-Amsterdam kunoma yiluphi usuku sisuka eLondon St. Pancras ngesikhathi 07:16 futhi kuthatha ingqikithi 3 amahora 55 amaminithi, ukufika ku Amsterdam Central ngesikhathi 12:11 (Amsterdam Centraal yigama dutch Amsterdam Central Station). Lokhu ngokuvamile kuba omunye amathikithi eshibhe etholakalayo, ngakho uma ungumuntu engakwenqeni avuka ekuseni ungagcina imali futhi amabombo out at sekhefu kokusa.
izikhathi Umzila kukhona ihora cishe wake, okuyinto amahlamvu wena inala ongakhetha izikhathi Ukuhamba. I isitimela sokugcina ebusuku isuka ngo 17:16 futhi efika 22:11, okuyinto nje isikhathi esanele ujabulele isidlo sebusuku enhloko-dolobha i-Dutch. Hlola indawo yethu lapho ungathola inkinobho kwesokudla kwesikrini noma vele uchofoze SaveATrain.com, ngeLondon ephelele ye-Amsterdam Eurostar yesikhathi.
ILondon kuya eBrussels Izitimela amanani
IGeneva kuya eLondon Isitimela amanani
ILondon ukuya e-Amsterdam Isitimela amanani
Ukubhuka Ticket lakho On The Eurostar
Wonke amathikithi wesitimela e-Eurostar afaka okungenani izingcezu ezimbili umthwalo nesikhwama isandla. Uma uhamba nge impela eningi wemithwalo, ungaphindeuphumeezikhangisweni ithikithi elikuvumela ukuletha izinto eziningi. Nakuba isabelomali izindiza ingashaja kancane for ukubhuka zabo kokuqala, isikhwama izimali kanye isihlalo ukukhetha amacala ngokushesha tente, okuyinto izindlela you phetho ukukhokha esengeziwe nokunye okuningi kancane.
Amanani amathikithi aleli eLondon aya e-Amsterdam Eurostar uhambo luye lushintshe kakhulu, ngakho sincoma ukuthenga amathikithi ngokushesha nje uyakwazi. Sengisho nje, lezi amathikithi niqhubeke ukudayiswa izinyanga ezintathu kusengaphambili, Nokho ngezikhathi ezithile ungazithola izinyanga eziyisithupha ngaphambi usuku lwakho travel. Sincoma ukuthi usebenzise yethu Londoloza Isitimela athenge amathikithi esitimela ngemali izwe iwebhusayithi ukuthola futhi ukubhuka amathikithi yakho isitimela, okuyinto efuna ngokuzenzakalelayo bonke yokusungula etholakalayo ukuze intengo intengo kungenzeka, yibhange.
Amanani Nezinhlobo Zamathikithi ELondon Aya e-Amsterdam Ngu-Eurostar Sitimela
I Eurostar isitimela usebenza ezintathu-class apholile kuya ibhajethi yakho. Kulabo nje ngifuna ukusuka endaweni eyodwa kuya kwenye, amathikithi ekilasini lesibili okungaba ngcono. Labo ku Ukuhamba ngezebhizinisi kungase esikhundleni saloko ithikithi Standard Premier noma Business Premier, kokubili okukuvumela ukuba ahlale unqambothi abaqeqeshi isidlo ngenkathi kho hambo!.
Njengoba sike ushilo, zamanani kuyehluka kuye izinsuku zokuhamba kwakho, ngakho-ke uzofuna ukubhuka ithikithi lakho lesitimela ngokushesha nje lapho ukutholakala kuvuleke. If you book far enough in advance, uzokhokhiswa ngifuna ukukhokha mayelana 92 Dollars nokubuya, noma mayelana 46 Dollars ngendlela eyodwa. Ilinde kuze kube umzuzu wokugcina ungakwazi ukushayela amanani isibhakabhaka-okusezingeni eliphezulu, nge izindleko cishe kabili kamuva uthenga ithikithi lakho.
Khumbula ukuthi kusukela ngo-May kuya phambili, isitimela ngqo kusukela Amsterdam Central Station eLondon St. Pancras uzoqala yokusebenza, okuzokwenza ngikusindise kwamahora amaningana isikhathi sokuhamba endleleni yakho ukubuya. Futhi ekuqaleni tinsita ngqo Rotterdam. Lawa masevisi beyoba ezishibhile zamanani zamanje.
It sika Kuyaphawuleka ukuthi le Eurostar ayitholakali kulabo abaphethe pass wesitimela, ngakho uma ufuna ukwenza lolu hambo i okuyenga futhi ezingabizi, uthenge ithikithi lakho Isitimela kusengaphambili. Ungathola izitimela amathikithi inthanethi at amawebhusayithi ahlukahlukene, yize lawo mawebhusayithi ekhombisa ukwehla kwentengo yamathikithi wesitimela e-Eurostar ngokuqhathaniswa Londoloza Iwebhusayithi zemininingwane.
Uma othile enhloko-dolobha, ungaxhuma phambili nge eziningi ezahlukene izitimela Amsterdam. Izinsizakalo zesitimela esinejubane elikhulu futhi zinikezwa ezindaweni eziningi kulo lonke izwekazi.
AmaBremen to Amsterdam Isitimela amanani
IHannover kuya kumanani wesitimela e-Amsterdam
Bielefeld kuya Amsterdam Isitimela amanani
IHamburg to Amsterdam Isitimela amanani
Onboard Isitimela se-Eurostar Ukusuka eLondon Kuya e-Amsterdamn
Uma ugibelile, Isikhathi sokuhamba sisuka eLondon siye e-Amsterdam ngesitimela cishe 3 amahora 52 amaminithi. Kuhlanganiswe ne zangaphambi Ukuhamba ozofika, Imininingwane yakho uhambo isikhathi kuyoba emhlabeni 4.5 amahora.
Njengoba kushiwo ngaphambili, kukhona khulula WiFi ugibelile, ukuze ukwazi ukuhambisana nawo wonke amakheli akho kanye nezidingo zokuxhumana. Kuye ithikithi lakho, ungase futhi baye Umqeqeshi yokudlela, lapho ungathola ukudla, iziphuzo Ungadla. Uma ehlezi endlwaneni eyakhiwe unqambothi, ukudla kuyolethwa ngqo esihlalweni sakho.
Lapho befika kule ndawo, asikho isidingo ukuba balungise ukulawula iphasiphothi, Nokho ngemva Brexit futhi ukususwa UK kusukela EU la masevisi zingashintsha. Qinisekisa ukuhlola imithetho yendawo ngaphambi kokwenza uhambo lwakho.
ILondon kuya e-Antwerp Isitimela amanani
ILondon ukuya eLille Isitimela amanani
IStrasbourg iye eLondon Izitimela zamanani
ILondon ukuya eRotterdam Isitimela amanani
Kunjalo, umbuzo wangempela uwukuthi kungani ncamashi Europe engcono sabhekana nge- travel isitimela – ngemva kwakho konke, leli zwekazi kahle exhunyiwe kalula traversable ngendiza, imoto, noma ibhasi. Nokho, kukhona izinto ezimbalwa njengoba nithandane indawo zasendle ngaphandle ewindini lakho ku ride isitimela, futhi kokuqala abahambi kukhona cishe lutho elula ezingaphezu kuka igxuma ebhodini isitimela nje ngaphambi kokuba ahambe. Lokhu kwehluke kakhulu esijulile zezindiza yaseYurophu, lapho isheke-ngesikhathi eziphambili okweqa amahora amabili futhi uchitha isikhathi esengeziwe nemali beya indawo sezindiza.
Ekhuluma isikhathi sokuhamba, Europe lalidume ngesivinini yayo nojantshi, okuyinto kakhulu kwalawo motorways yalo emazombezombe. Izitimela kulo lonke leli zwekazi ziyashesha futhi ngokuvamile oqondile, okusho isikhathi beya futhi isikhathi esiningi ukuhlola.
Iziteshi zezitimela futhi banokuhlangenwe kokuba kahle elise kaningi akhiwa ngaphakathi enkabeni yedolobha. Ayevame ukunikeza izikhathi zokusuka amaningi ngosuku ku izinkulungwane imizila, okuyinto izindlela uzoba njalo inketho ukuhamba.
IFrankfurt kuya eLondon amanani entengo
IMunich ukuya eLondon Isitimela amanani
IMoutiers kuya eLondon Isitimela amanani
Marseilles kuya eLondon Isitimela amanani
Ukucinga indawo yethu ukuze amathikithi ncwadi konke izindawo engcono yaseYurophu, kufaka Belgium, Italy, Switzerland kanye UK (kufaka phakathi isitimela esisuka eLondon siye e-Amsterdam nge-Eurostar). search yethu injini yakhelwe eqela ngaphezulu kuwo wonke amathikithi futhi zihlanganisa ayikho imali yokubhuka. Senza kube lula ngawe ukuba uthenga ngokwamukela ezindleleni eziningi lokuhola imali, kuhlanganise credit card, Giropay, Ideal futhi abaningi.
Ngakho, yini isizathu sakho travel, noma ngabe ohamba yedwa noma nabanye, thatha imizuzu embalwa ukucinga amathikithi wesitimela ku-Gcina isitimela, okuyinto izipesheli amanani aphansi, yibhange.
Ufuna incwadi? Thatha 3 imizuzu bese uthola ithikithi eLondon yakho Amsterdam ngesitimela ku www.saveatrain.com . Gcwalisa usuku nesikhathi ongathanda ukuhamba, futhi thina izokunikeza intengo engcono ukuze nithathe uhambo lwenu.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho? Chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Flondon-amsterdam-direct-train%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
#stpancras amsterdamcentraal europeantravel London longtrainjourneys Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi travelamsterdam phungingland